နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၄) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on November 21, 2014 at 15:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၁၄) မှာတော့ အားကစားအကြောင်း ဆွေးနွေးရာမှာ သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Phil : Say, what's your favorite sport?
Jack : Hmmm ... It's hard to say. I like golfalot but I guess I like tennis better.
Phil : Do you play much tennis?
Jack : Yes, quiteabit. How aboutagame sometime?
Phil : Sorry. I'm strictlyaspectator—football, baseball, basketball, golf... I watch them all.
အပေါ်က dialogue မှာ sport နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြောဆို သုံးနှုန်းပုံ တွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ် စကားပြောမှာ native speakers တွေ စကားပြောတဲ့အခါ attention ခေါ် နားထောင်သူရဲ့ အာရုံကိုရဖို့ အသံတစ်ချို့ကို လုပ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီ အသံတွေဟာ သူ့ချည်းဘဲ တစ်လုံးပဲသုံးရင် ဘာအဓိပ္ပါ္ပယ် မှမရှိပါဘူး။
Say = an interjection (အပိုင်း ၁၂ တွင်ဖေါ်ပြပြီး)
Phil က Jack ကို အားကစား အကြောင်း မေးချင်လို့ "Say.." နဲ့စပြောပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ "Say" ကတစ်လုံးတည်း ဆိုရင် ဘာအဓိပ္ပါ္ပယ် မှမရှိပါဘူး။ Phil က Jack ရဲ့ attention ကိုရ ဖို့ စကားကို say နဲ့စလိုက်တာဘဲ။
Pause sound လို့ခေါ်တဲ့ စကားပြောသူက သူပြောသည့်စကားကို စဉ်းစားပြီး အချိန်ယူနေတုန်း ပြုလုပ်တဲ့ အသံဖြစ်တယ်။ မြန်မာစကားမှာလဲ "အင်း…၊ အဲ… ၊ ဒါနဲ့၊ ဘယ်လိုပြောမလဲ" စသည်ဖြင့် စဉ်းစားနေတဲ့ အခါပြောကြတယ်နော်။
Hmmm ... It's hard to say. I like golfalot but I guess I like tennis better.
မြန်မာလိုတော့ " ပြောရခက်တယ်" လို့ အဓိပ္ပါ္ပယ် ရတယ်။
It's hard to say = that'sadifficult decision to make; it's difficult to makeaclear-cut choice.
…but I guess I like tennis better
I guess ဆိုတာက "ထင်တာဘဲ" လို့အဓိပ္ပါယ် ရတယ်။ တစ်ခုခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါ I guess ကို ထည့်ပြောတယ်။
It's hard to say. I like golfalot—but I guess I like tennis better.
I guess= I think (that)…
Phil က Jack ကို "Do you play much tennis?" လို့ မေးလိုက်တော့ Jack က "Yes, quiteabit." "တော်တော်လေး ကစားဖြစ်ပါတယ်" လို့ပြန်ပြော လိုက်တယ်။
How aboutagame some¬time? = Would you like to play sometime?
How about နဲ့မေးရင် လုပ်ချင်သလား၊ လုပ်ကြမလား လို့ဖိတ်ခေါ်တာပါ။
Sorry ကို No အဓိပ္ပါ္ပယ် နဲ့ဒီနေရာမှာ ပြောတာပါ။ တစ်ခုခု ကမ်းလှမ်း ဖိတ်ခေါ်တာကို မလုပ်ချင်ကြောင်း ငြင်းဆန်တဲ့ အခါ ယဉ်ယဉ် ကြေးကြေး ပြန်ပြောတာပေါ့။
Sorry. I'm strictlyaspectator..
I’m sorry, but I don't play tennis.